Ajụjụ - Qingdao Renergy Equipment Co., Ltd
Olee otú a ifufe tobaim ka ọkụ eletrik?
Ifufe amama pupụtara gburugburu; a spins na aro, nke ejikọ a generator. A generator arụpụta eletriki ike n'ibu ike.
Gịnị size of ifufe tobaim m mkpa?
Nke a na-adabere na gị ume ina. Biko gbakọọ gị max electric oriri kwa ụbọchị. Ná nkezi, a na-ahụkarị American home ga-achọ obere tobaim na 5kw ma ọ bụ 10kw tobaim.
Gịnị bụ nkezi payback oge?
Na ogologo nke payback oge na-adabere na tobaim, àgwà nke ifufe na nwụnye site, agbasokarị eletrik udu, na dị ego na ịkpali. Dabere na ndị a na ihe ndị ọzọ, oge ọ na-ewe iji n'ụzọ zuru ezu naghachi-eri nke a obere ifufe tobaim nwere ike n'ebe ọ bụla si 6 ka afọ 30.
Olee otú obere ifufe usoro nọgidere na-enwe?
Eme nyocha na-rụrụ mgbe ọ bụla afọ ole na ole nke a tobaim si 20 + -year lifespan. A ọkachamara installer ma ọ bụ zụrụ ẹkesikpede (na-emekarị na emeputa ma ọ bụ na-ere nēre tobaim) ekwusi tobaim na ụlọ elu site ahụ inspections, bụ ezie na ụfọdụ turbines nwere ike ekwu na remotely site na kọmputa dị n'ụlọ.
Ọ dị m mkpa na-eme atụmatụ ikike?
Obere Wind Energy nrụnye nwere ike ịchọ ime atụmatụ ikike na i kwesịrị ịdị na ịkpọ obodo ikike. N'ozuzu, mba atụmatụ atumatu akwado mmepe nke obere ọnụ ọgụgụ Wind Energy.
Bụ ifufe turbines ụzụ?
Anyị Obere Wind turbines e mere na-adị nnọọ jụụ, ihe atụ site na-enwe kpọmkwem mbanye usoro iji zere gia igbe ụzụ na ntọt arụmọrụ. Ke ofụri ofụri, ifufe na-eme ka ndị ọzọ mkpọtụ karịa a ifufe tobaim. Ọ bụ ihe kasị eleghi anya na nke ọ bụla nụrụ ụzụ si Small Wind turbines ga-anụ na ihe karịrị 30 m. Mkpọtụ dị n'ọhịa gburugburu 40-50 dB (A).
7.What ụdị akwado nwere ike ị na-enye maka na-na saịtị echichi?
Tupu echichi, anyị ga-enye ihe niile oru ntuziaka. Ka ọ dịgodị, anyị nwere ike izipu ihe ẹkesikpede ga na-elekọta echichi.
8.How nwere ike m na-ahọrọ ndị nwere ezi uche na usoro?
Ọ bụrụ na gị na oru ngo dị anya n'ebe ọha na eze na okporo network, mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịtụle anya okporo usoro.
Ọ bụrụ nnọọ na ị na-atụ anya belata electric udu, mgbe ahụ ị pụrụ ịtụle na okporo usoro.
Ewezuga ha, anyị nwere ike inye ndị Micro okporo / telecom ojii na ifufe anyanwụ ngwakọ usoro dị ka dị iche iche na ọnọdụ.
9.Maybe m nwere ike dị nnọọ ịzụta ụfọdụ mmiri ka agụba, inverter, na ulo-elu?
Ee, ị nwere ike. Ọ bụla yiri oru ngo, na-anabatanụ òkè anyị.
Ewezuga mmepụta, olee ihe ọzọ i nwere ike ime?
Anyị nwere ike na-ahụ maka imewe, analysis, ngụkọta oge, echichi na ọrụ.